Iincwadi eziBalaseleyo zeBiography
I-Escombros, nguFernando Vallejo
Yonke into inokuthi iwele. Ngakumbi nangakumbi, ubomi bunye bubaleka iziqhushumbisi ezilawulwayo. Emva koko i-rubble ihlala, apho iinkumbulo ezibalulekileyo zingazange zifumaneke ngexesha. Kuba ngapha koko, akukho nkumbulo igcina ukuchukumisa okanye ilizwi kunye ...
Xa sijonga ngasemva, nguJuan Gabriel Vásquez
Kukho enye into eyingozi malunga novukelo lwanamhlanje. Phantse zonke izinto zingeniswa elizweni ngokusesikweni kokugwetywa kwalowo uthethelela lowo uthe cwaka, nangona ukuthula kuthe cwaka nje, ekutshatyalalisweni kwento echaseneyo. Yiyo loo nto uphela, ungene emanzini, uqiniseke ngokuvuka ...
Abafazi bomphefumlo wam, we Isabel Allende
Ukwazi ngentliziyo indlela eya kumthombo wokhuthazo, Isabel Allende kulo msebenzi ujika abe yi-existential gibberish yokuvuthwa apho sonke sibuyela kwinto eyakha ubuni bethu. Into endibetha njengendalo kwaye ngexesha elifanelekileyo, ngokuhambelana nodliwanondlebe lwakutsha nje ...
Ukuzivocavoca imemori, ngu-Andrea Camilleri
Kunika umdla ukwazi ukuba xa umbhali ebengekho esemsebenzini, yintoni enokuba yayiyimpapasho ephazamisayo, ukugqithisa ebomini, kugqibela ngokuba yinto enqabileyo kwiintsomi emva kokubhubha kwakhe. Kodwa nayo yonke indlela yokuya kubantu abangazange bafunde umbhali ongazange ashiye indawo ...